Intengiso yeSelfowuni iBuyile kwiVogue-Ii-Brands ingazisebenzela njani kwaye ikhulise iiPhulo zabo zeselfowuni? | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 11, 2022 NgoLwesibini, Januwari 11, 2022 UDimitris Maniatis
Wonke umntu uyamkela indawo yonke yezixhobo eziphathwayo. Kwiimarike ezininzi namhlanje - ngakumbi kumazwe asakhasayo - ayisiyomeko nje iselfowuni kuqala kodwa ephathwayo kuphela.
Kubathengisi, ubhubhane uye wakhawulezisa ukuya kwidijithali ngaxeshanye njengoko ukukwazi ukujolisa kubasebenzisi ngeekuki zomntu wesithathu kupheliswa.
Oku kuthetha ukuba iitshaneli eziphathwayo ezithe ngqo ngoku zibaluleke ngakumbi, nangona uninzi lweempawu zisabopheleleka kunye namaphulo okuthengisa ahlukeneyo avala umsantsa phakathi kwemveli ye-intanethi kunye ne-intanethi. iselfowuni kuqala iindlela.
Kukho iindawo ezininzi zeentlungu, ngokukodwa ukungabikho kwe-ID yomsebenzisi engaguqukiyo kuwo wonke amaqonga kunye namajelo ahlukeneyo. Umsebenzisi wokugqibela udla ngokugqibela ngokugqithiselwa kuspamed, kwaye umyalezo webhrendi uphele ungangqinelani - okanye ulahleke kwaphela.
Umsinga ongasentla uphuhlisile Ukukhula iqonga lentengiso ephathwayo kwilinge lokujongana nale miba. Yatyhila iqonga kanye njengoko ubhubhani we-COVID-19 waguqula umhlaba wajonga phantsi kwaye wenza ukuba uthethathethwano lwedijithali lube yimfuneko kunokuba ibe bubunewunewu kumashishini amaninzi.
Ke Yintoni Ukukhula?
Masiqale ngezinto ezisisiseko. Ukukhula iqonga lokuthengisa idijithali elenza ukuba imibutho inikezele ukubandakanyeka kwabathengi abaninzi, ngokuyininzi ngokusebenzisa izixhobo eziphathwayo, isebenzisa amajelo afana newebhusayithi ephathwayo, iSMS, iRCS, izaziso zesixhobo kunye neenethiwekhi zentlalo. Inikezelwa njengeqonga lokuzisebenzela lokuthengisa i-automation. Nangona kunjalo, i-Upstream ikwanayo nenkonzo elawulwayo, esebenza kakuhle kwiimeko apho abathengi bangenayo i-bandwidth eyongezelelweyo okanye ubuchule bokuqhuba imikhankaso yokuthengisa yedijithali.
Iqonga lijolise ekubeni a ivenkile yokuma enye yeempawu. Idibanisa ukudalwa komxholo, i-automation yephulo, uhlalutyo, ulwazi lwabaphulaphuli, ukuthintela ubuqhophololo be-ad kunye nobuchule bokulawula isiteshi kwiqonga elinye.
Inyathelo lokuqala kukudala nge Isitudiyo sephulo apho abathengi banokwenza uhambo oluguquguqukayo, lwamajelo amaninzi, ngaphandle kwamava ekhowudi. Ngamava anomdla kakhulu, usebenzisa ukutsala kunye nokulahla ukwakha, ukuhlela kunye nokujonga amava onke omsebenzisi.
Okulandelayo kuza isikali. I YokuThengisa isixhobo sivumela imibutho ukuba izenze ngokuzenzekelayo ukuhamba kwentengiso ngomthengi ngamnye ukuphumeza iindlela zokuthenga ezilungiselelweyo, ukuze ukuthengisa kwisikali kusenako ukuziva kufanelekile, ngokomxholo-ukuqonda kunye nobuqu.
The Ulawulo lwabaphulaphuli ivumela amashishini ukuba afumane, alawule, achaze, ahlalutye kwaye avule idatha yomthengi ukwenzela ukuphunyezwa kwephulo elichanekileyo elihamba ngaphaya kweeseti zedatha ezisisiseko ukuze uhlahlo lwabiwo-mali lube nokwabiwa ngcono.
Kwaye kukho Ukuqonda kunye nohlalutyo iimpawu, ezenza umqolo weqonga lokuKhula. Ngokubeka izixa ezikhulu zedatha emsebenzini, amashishini anokuphucula imikhankaso yokuwenza asebenze ngokuqhubekayo ngokuhamba kwexesha ngokuqokelela ulwazi malunga nokusebenza, ukuzibandakanya, ukuchulumacha, ingeniso kunye nokunye.
Ukukhuselwa kubuqhetseba kuza nge-Secure-D, i-Upstream's anti-fraud feature, ekhuselayo kwi-ad fraud usebenzisa i-ad eyakhelwe-ngaphakathi i-ad blocking, i-blocking pattern blocking, inkqubo yokucima intlawulo, izaziso zesixhobo esinentsholongwane, ukulinganisa, uphando lwesiganeko kunye nojongano olukhuselekileyo.
Yiloo ndlela edibana ngayo yonke into. Ngoku makhe sijonge indlela iqonga elisetyenziswa ngayo ziimpawu ezicinga phambili.
Ngokutshabalala kweekuki zomntu wesithathu ngokuthe ngqo elundini, uphawu lwebhiya oludumileyo lwalufuneka ukuze luqalise ukwenza ubudlelwane obuthe ngqo nabathengi kwenye yeemarike zalo eziphambili - eBrazil. Xa ejongene nolo tshintsho uphawu lwalufuna ukuqalisa ukwakha i-arsenal ye iqela lokuqala idatha, ngoko inokuphuhlisa indlela ethe ngqo yokubandakanya abaphulaphuli kunye nokukhuthaza izibonelelo ezitsha - kwaye yabele ngcono ibhajethi yayo yokuthengisa.
Ngokusebenzisa Ukukhula iqonga, uphawu luye lwakwazi ukufikelela kwisiseko somrhumo womqhubi weselula omkhulu waseBrazil - enikezela nge-50MB yedatha yeselula yamahhala ngokutshintshiselana neenkcukacha zabo. Kwisithuba seveki, sele yenze ngaphezulu kwe-100,000 ekhokelayo. Oku kuyinike uthotho olukhulu lwamathemba anokuzibandakanya kunye nokuthumela iintengiso kwaye ihlaziye amandla ayo okuthengisa kummandla.
Omnye umthengi, umqhubi wezonxibelelwano ophambili waseMzantsi Afrika, kufuneka anyuse umgangatho wokuthatha inkonzo yakhe yokusasaza umculo kurhwebo lwasekhaya. Nangona kunjalo, umqhubi wayejongene nokufunyanwa kwabathengi kunye nemiba yokwenza imali njengoko amaphulo angaphambili okuthengisa engazange asebenze kakuhle. Ixesha elide, ibidinga inkonzo entsha ukuze ikhuphisane intloko-to-head kunye neSpotify kunye neApple Music kwaye ibe yinkonzo enkulu yokusasaza umculo ekhethwayo eMzantsi Afrika.
Kwiinyanga ezintathu zokuqala zephulo, umqhubi wabona ukunyuka okumangalisayo kwe-4x kwisiseko somsebenzisi osebenzayo wenkonzo yokusakaza umculo. Ekuhambeni kwephulo leenyanga ezisi-8, phantse izigidi ezi-2 (i-1.8 yezigidi) zababhalisi abatsha baye baziswa kule nkonzo. Kwiinyanga nje ze-8, uphawu luye lwaguqula umgangatho ophezulu - kodwa ungasebenzi - inkonzo yedijithali ibe ngumthombo oqinileyo wengeniso ephindaphindiweyo kunye nenkokeli yemarike kwindawo.
Ngamafutshane, uthumo lukaKhukhula kukwenza ukuthengisa okuselfowuni kube kukuhle kwakhona, ukunika abasebenzisi olona hambo lukhulu lomthengi olunokwenzeka, olulungiselelwe ubuntu babo kunye neemfuno, ukuzisa impumelelo yokuthengisa kumanqanaba amatsha ngokupheleleyo kumashishini. Iqonga libonakaliswe ukuba libonelele nge-3x iireyithi zencoko kunye ne-2x iireyithi zokuthethana xa kuthelekiswa nephulo ledijithali lemveli, kunye nesidingo esipheleleyo sotyalo-mali lwangaphambili.
Le yintengiso yeselula eyenziwe ngokufanelekileyo.
I-Upstream yinkampani ekhokelayo yetekhnoloji kwintengiso yeselula kwezona ntengiso zibalulekileyo ezivelayo kwihlabathi. I-platform yayo ye-automation ye-automation platform, i-Khulisa, ekhethekileyo kuhlobo lwayo, idibanisa izinto ezintsha kwintsimi ye-automation yokuthengisa kunye nedatha, ukhuseleko oluvela kwi-intanethi ye-adverting fraud, kunye ne-multi-channel yonxibelelwano lwedijithali olujoliswe ekudaleni amava omntu kubathengi bokugqibela. Ngaphezulu kwee-4,000 eziyimpumelelo zemikhankaso yokuthengisa i-mobile, iqela eliPhezulu linceda abathengi balo, iimpawu ezikhokelayo emhlabeni jikelele, banxibelelane ngokufanelekileyo nabathengi babo, ukwandisa ukuthengiswa kwedijithali kunye nokunyusa ingeniso yabo. Izisombululo eziphezulu zijoliswe kubathengi be-1.2 yezigidigidi kumazwe angaphezu kwama-45 eLatin America, e-Afrika, kuMbindi Mpuma kunye ne-Asia-mpuma ye-Asia.
tags: umculo we apuloindlela yokuziphatha ethintelayoiqela lokuqalakukhulaimijelo emininziulawulo lwabaphulaphuli mobileidatha yokuziphatha yeselulaucwangciso lwephulo eliphathwayoiOkhestra yesitishi esiphathwayointshukumo ehambayomobile creativeidatha yedemografi ephathwayoi sixhoboukuzibandakanya mobileiselfowuni kuqalaumakhi uhambo oluhambahambayokpi ehambayokpis ehambayourhwebo mobileukuthengisa okuzenzekelayoiqonga lokuthengisa oluzenzekelayo lokuthengisaamaphulo intengiso mobileidatha yokusebenza kweselulaportal ehambayoizaziso zeselfowuni zokutyhalaukubuyisela imobileingeniso mobileimivuzo mobileukhuseleko lweselfowuniulwahlulo lweselulamobile ekuhlaleniUkujolisa kwiselfowuniidatha yetransekshini yeselulaumculoi-predictive ai blockingHilltownphezuluukukhula komlambo
UDimitris Maniatis wajoyina umfula ngo 2017 ukuya entloko Secure-D. Ngaphantsi kobunkokeli bakhe i-Secure-D yakhula yaba yinqanaba eliphumeleleyo, iqonga lokhuseleko lomthwali, elithenjwa ngabaqhubi benethiwekhi yeselula emhlabeni jikelele. Uye waba yi-CEO e-Upstream ngoJanuwari ka-2020 kwaye wakhokela ngempumelelo inguqu yenkampani kwiqonga lentengiso yeselula. Ngaphambi kokujoyina i-Upstream, uDimitris wayekwintengiso ngokusebenzisa 'zonke izinto zewebhu', i-arhente yokuthengisa yedijithali ayisungula kwi-2009.